သတင်းကဏ္ဍ | Dwave | Page 2
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ ဝန်ကြီး Tillerson ကို မြန်မာနိုင်ငံဆီ ဖိတ်ခေါ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အထူး ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ မနီလာမြို့တော်မှာ အချိန်တို တွေ့ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ အဲဒီမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စကို...	Read more
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မတူညီသည့် အသိုင်းအ၀န်းများစွာ နေထိုင်ကြသည်ကို မေ့ထား၍ မရကြောင်းနှင့် မိမိအနေ ဖြင့်လည်း လူတိုင်းအတွက် သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အနာဂတ်ကိုသာ ဖန်တီးပေးရန် ရည်ရွယ်...	Read more
Posted By: D Waveon: October 31, 2017 In: သတင်းကဏ္ဍ, ခေါင်းကြီးသတင်းNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကာတာနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Soltan Bin Saad Al Muraikhi ဦးဆောင်...	Read more
Posted By: D Waveon: October 30, 2017 In: သတင်းကဏ္ဍ, ခေါင်းကြီးသတင်းNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား ယနေ့နံနက် ၁ဝ န...	Read more